I-Pepitos Valencianos, iresiphi yesiko | Ukupheka kweKhitshi
I-Pepitos Valencianos, isitya esiqhelekileyo
Namhlanje bendifuna ukuzisa enye Iresiphi yesiqhelo yeValencian, endiyibambe kumzala wesihlobo. Kuqala bendothukile kuba ndingazi ukuba yintoni, kodwa bandicacisela, ndizamile kwaye ndiyabathanda, ke namhlanje ndifuna ukwabelana nabo nawe.
Ezi Ipepitos yaseValencian Benza ngendlela yesiko ngeentsuku zePasika. Iresiphi yemveli ikunye qeqelani, nangona ndiyitshintshile ngetumato, ipepile kunye netswele yesosi.
Isiqingatha sepepile eluhlaza.
Iitoti ezi-2 zetyhuna.
Iqanda elibethiweyo lokugquma.
Ukwenza le recipe yeValencian pepitos, kuya kufuneka kuqala senze i padding. Ukwenza oku, siza kunqunqa itswele, ipepile kunye netumato kwiityhubhu ezincinci kakhulu. Ngale nto, siza kwenza isosi apho yonke into ifakwe poached kakuhle.
Kwangelo xesha, siza kufaka epanini encinci pheka amaqanda malunga nemizuzu eli-12. Ngakolunye uhlangothi, siya kuzinqumla izonka zibe ngamaqhekeza kwaye sisuse i-crumb ngaphakathi.
Xa amaqanda ephekiwe, nathi siyawasika. Kwi yiyo Siza kujoyina isosi kunye namaqanda aqingqiweyo abilisiweyo kunye neetoti ezimbini zetyhuna. Ukongeza, siya kongeza ukutshiza kwetamatato eyosiweyo, ukwenza intlama eyohlobo olunye.
Ekugqibeleni, siya kugcwalisa izahlulo zebar isonka ngokugcwaliswa kwaye, siya kuzogquma iziphelo zayo ngesonka esincinci esasisuswe ngaphambili. Iyabethwa kwiqanda elibethiweyo kwaye siya kulifaka kwioyile eshushu.
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela le recipe yesiqhelo Ipepitos yaseValencianNdizamile ukuyenza zaphuma zimnandi ngathi zezomzala wale sihlobo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iresiphi yeRatatouille
Ixesha elipheleleyo Imizuzu ye30
Iikhilokholi ngokusebenza 581
Cuisine yesiNtu, I-Tapas kunye ne-skewers
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » I-Pepitos Valencianos, isitya esiqhelekileyo
Iipepitos okanye ii-chimos njengoko ziyi-djice eValencia zenziwe ngemiqolo emincinci, akukho zixhobo ze-psn, iziqwenga ezimbalwa zinqunyiwe, zikhutshiwe yimvuthuluka, ukuzaliswa kubekwa kuzo, ngesinye okanye ezimbini zokuvungula incam ibanjiwe kwaye Ukuphumla.Njengoko ubutshilo, kudlule kubisi kunye neqanda, zingcono.
UJuan Raga sitsho
Iipepitos okanye iitshiti zenziwe nge-titaina (iitumato ezigayiweyo, ipepile ebomvu kunye noluhlaza, ityuwa, iswekile, ityhuna enetyiwa, igalikhi yamapine, konke okuthosiweyo) nangona ungongeza iqanda elibilisiweyo kunye ne-tuna ngaphandle kweoyile kwaye yenziwe ngemiqolo emincinci (phantse yonke imihla ubuncinci iintsuku ezi-2) ukuba incam iyasuswa, imvuthuluka iyachitheka, izaliswe, igutyungelwe yimvuthuluka kunye nencam, ivaliwe ngeothiphu kwaye ihlala igqitha Ubisi, iqanda elibethiweyo kwaye liyosiwe kwioyile, zifakwa kwiphepha lokufunxa ukususa ioyile egqithisileyo, ezi ziyinyani nangona zinokwenziwa ngaphandle kwetyuwa enetyiwa.
Ndiyathanda nokwenza ihlobo ngepepile eyosiweyo, iqanda elibilisiweyo, ii-olive ezicoliweyo okanye ii-capers, ityhuna okanye i-mackerel kwioyile, itswele elinqunqiweyo, ioyile yomnquma kunye netyuwa encinci, nesonka semihla emi-1-2 esiza kusetyenziswa. Isonka esidala esenziwe ngumama
Phendula uJuan Raga
no se hace con barra de pan , sino con panecillos se corta una punta y se tapa con esa punta cortada cosida con un palillo
se baña en leche antes de sofreir
al pisto se le añaden piñones
Ubisi othosiweyo, iresiphi yesiko